दाखमद्य र ख्रीष्टियान जीवन | Nepali Christians
January 7, 2017 7:19 pm by: Admin Category: Articles A+ / A-
हामी आज एउटा ठूला विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो हो के ख्रीष्टियानहरूले दाखमद्य पिउनुहुन्छ ?
यो विषय निकै नै गम्भीर भएको छ। धेरै ख्रीष्टियानहरू यस विषयमा रनभुल्ल परेका छन्। कुनै बाइबलको पदहरूले दाखमद्य पिउ भनेर आज्ञा गरेको छ भने कुनै पदहरूले दाखमद्य पिउनुहुँदैन भनेको छ।
मुख्य कुरा के हो भने कानाको विवाह भोजको समयमा येशू ले पानीलार्इ दाखमद्यमा परिवर्तन गर्नुभयो। अन्तिम भोजको समयमा दाखमद्य लिएर त्यस दाखमद्यलाइ उहाँको रगत हो भनी भन्नुभयो। येशू ले आफ्नो सेवा दाखमद्यले दुइ भोज गरी सुरू र अन्त्य गरेका जस्तो पनि देख्न सकिन्छ।
धेरै ख्रीष्टियानहरू आफुलाइ आत्मिकी ठान्न यो साँच्चै दाखमद्यलार्इ ताजा अङगुरको जुस वा रस हो भनी ढाकछोप गरी आफुलार्इ आत्मिकी बनाउन खोजेको पाइएको छ। यसो गर्दा यिनिहरू येशू भन्दा आत्मिकी छैनन। अनि नोआले यो दाखमद्य बनाउन सुरू गरेका हुन् जो हामीभन्दा धेरै महान छन्। तब हामी कसरि येशू र नोआभन्दा आफै धर्मी हुन सक्छौँ ररु त्यो कुरा छोडनुहोस कुनै कुनै बलिहरूमा दाखमद्य चढाउन जरूरी छ भनेर मोशाले हामिलाइ बाइबलमा घरीघरी सिकाउँछन्। तपाइले देख्नुभयो दाखमद्य कतिको महत्वपूर्ण कुरा रहेछ।
जब येशू ले पानीलाइ दाखमद्यमा परिवर्तन गर्नुभयो त्यो मानिसहरूको अभाव पुरा भएको देखिन्छ र त्यो थियो दाखमद्यको अभाव।
समस्या दाखमद्य गलत रूपमा प्रयोग गर्नुमा छ। मानिसहरू मात्तिन र नसामा पर्न दाखमद्य पिएर गलत गर्छन। यो यौन सम्पर्क जस्तै हो। मानिसहरू आफ्नो श्रीमती सित नभएर अरूसँग यौन सम्पर्क गरी पाप गर्छन्। कतिजना आफ्नो श्रीमतीसँग कसरि यौन सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा भुलेका छन् र नानाथरी कुराहरू प्रयास गरी यौनको नशामा पर्ने गर्छन। नत दाखमद्य नराम्रो हो नत यौन सम्पर्क। तर यिनिहरूको प्रयोगको उध्देश्शयमा अवश्य पनि गढबढ भएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। तपाइले रोटी पनि चाहिने भन्दा बढी खानुभयो भने पेटलाइ समस्या हुन्छ। हामीले खानु र पिउनु त पर्छ तर ठीक नाप र उध्देश्ययको लागि।
यदि तपाइहरूलाइ ठीक रूपले दाखमद्य पिउनु आउँदैन भने कृपय गरी आज देखी नै यसको लतबाट छुटिनुहोस यसबाट टाढा नै रहनुहोस्। जसरी कुनै पनि कुराको बढी सेवनले हानि ल्याएझै दाखमद्यको बढी सेवनले खरावी ल्याउँछ।
अस्ती मात्र मैले १५ वटा जति मःमः खाएको थिए, तर त्यसले पेटमा गडबढी ल्यायो। यी मःमःहरू निकै ठूला आकारका थिए, गुणस्तरीय थिए तापनि जम्मा ७० रूपियाँ प्लेट। यो मःमः कपनको डिकिज रेष्टुरेन्टमा पाइन्छ । मिठो भएकोले मैले धेरै खाएँ र त्यसले दुईदिन जति पेटमा समस्या ल्याउने काम गर्यो।
वास्तवमा मानिसहरूले के पीइरहेको छन् ?
माफ गर्नुहोला धेरै ख्रीष्टियानहरूले दाखमद्य खानुहुन्छ भन्ने निहुँमा बियर, विस्की, रक्सी, जाँड र अन्य मत्वाली पदार्थहरू पिइरहनुभएको छ। तपाइहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। येशू ले पानीलाइ दाखमद्यमा परीवर्तन गर्नुभएको हो, वियर, विस्की, जाँड र रक्सीमा होइन। भट्टिमा पाउने रक्सि र जाँडको बारेमा बाइबल चुप छ।
दाखमद्य के हो भनी गुगल, युट्युब र अन्य वेबसाइटमा खोजे पछि जानकारी लिन सकिन्छ। दाखमद्य बनाउन वर्षौ, महिनौ लाग्छ र यो कुनै अरू मत्वाली पदार्थ जस्तो होइन। जति पुरानो त्यतिनै राम्रो र स्वास्थमय हुन्छ। यसको मूल्य अरू मत्वाली पदार्थभन्दा बढी नै हुन्छ। कुनै दाखमद्यको लाखैँ रूपियाँ पर्न जान्छ।
तर येशू को महिमा होस जसले अङगुरलाइ होइन तर पानीलाइ दाखमद्यमा एक छीनमा परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले ६ घ्याम्पा दाखमद्य तयार पार्नुभयो। यो उहाँको पहिले आश्चर्यकर्म थियो। यहुन्ना २:१-११
यदि ख्रीष्टियानहरू आफूलाइ दाखमद्य पिउन नचाही प्रभु भोज मान्न चहान्छन् भने, अङगुरको ताजा रसभन्दा पानीनै पिउँदा असल हुन्छ। यसो गर्दा फेरी बढी आत्मिकी चाहि पटक्कै पनि ठहरिनुहुन्न है तपाइहरू। किनभने येशू ले ताजा अङगुरको रस प्रयोग गर्नुभएको होइन तर त्यो त वास्तवमै दाखमद्य थियो।
अनि कृपय गरी काना नगरको बाहाना बनाएर मात्तिने गरी दाखमद्यको सट्टा भट्टिहरूमा पाउने रक्सी र जाँड नखानुहोस।
रक्सि र जाँड बनाउने ख्रीष्टियानहरू
फेरी हामी अर्को एक थरिका ख्रीष्टियानहरू भेट्टाउँछौ जसले येशू ले काना नगरमा बनाएको दाखमद्यलाइ बहाना बनाइ आफ्नो भट्टी पसलमा जाँड र रक्सी बनाउँछन्। मेरो प्रिया भट्टी पसलका रक्सि र जाँडको व्यापारीहरू हो, दाखमद्य बनाउनुस, दाखमद्य !! येशू ले पानीलाइ दाखमद्य बनाउनुभएको हो, जाँड, रक्सी, र वियरहरू होइन !!
तर होस गर्नुहोस है, दाखमद्य बनाउँदा करडौँको लगानीको खाँचो छ, आफ्नै अङगुरको बगैँचा हुनु अनिवार्य छ। यसको लागि त धेरै दिमाग चाहिन्छ तर यदि तपाइ अङगुरको नभइ येशू लेझै पानीको दाखमद्य बनाउन चहानुहुन्छ भने यो तपाइको लागि असम्वभव छ, तपाइ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि येशू ले बनाउनुभएको पानीको दाखमद्य अहिले संसारमा पाइन्न र अवश्य पनि येशू ले बनाएको दाखमद्य संसारको सबैभन्दा मूल्यवान र फाइदाजनक हुनुपर्छ जसमा कुनै पनि बेफाइदा छैन। र यसो गर्न मानिसले जानेको भए सायद, यो दाखमद्यको मूल्य लाखौ(करडौ रूपियाँ हुन पुग्थ्यो र करीब सय बर्ष पछि मात्र यसको तयारी हुन सक्थयो।
दाखमद्य पिउने बाइबलिय तरिका ?
हामीलाइ बाइबलमा दाखमद्य पिउने तरीका र उद्देश्य बताइएको छ।
१। अब जाउ अनि आफ्ना खानाहरू खाउ र आनन्द मनाउ। दाखमद्य खाउ र खुशी होउ। तिमीहरूलाइ यति गर्न परमेश्वरबाट अनुमति छ। उपदेशक ९:७
२।तिमोथी साधारणतय तिमी पानी मात्र पिउँछौ। यसो नगर केही दाखमद्य पनि पिउने गर। त्यसले तिम्रो पेटलाइ सहयाता गर्छ अनि तिमी घरीघरी बिमारि पर्ने छैनौँ। १ तिमोथी ५:२३
३। दाखमद्य खाएर नमात्त। त्यसले तिम्रो आत्मिक्ताको नाश गर्छ। आत्माले भरीपुर्ण होउ। एफिसि ५:१८
४। दाखमद्यले जीवन अझै आनन्दित बनाउँछ। उपदेशक १०:१९
तपाइहरू जो रक्सि, जाँड, वियर, तुम्बा र अरू मत्वाली पदार्थ सेवन गर्दैहुनुहुन्छ भने आजैबाट यी कुराहरूलाइ त्यागी दाखमद्य तिर लाग्नुहोस।
दाखमद्य पिउँदा मात्तिने गरी नपिउनुहोस। यसो गर्नु बाइबलमा मनाही छ। दाखमद्यको मातले पिएर नोआ नाङगो सुते र लुतले आफ्नै छोरीहरूसँग व्यभिचार गरे। यसो गर्नाले पतन ल्याउँछ।
बरू आनन्द मनाउन पिउनुहोस र कहिले काँहि कुनै पेटको समस्या छ भने यसको सेवन ठीक मात्रामा गर्नुहोस। दाखमद्य पिएर मात्ते पछि शरीरको मात्र होइन तर आत्मिक्ताकै नाश गर्छ।
जसरी येशू ले नमात्तिने गरी कनानको बिबाह भोजमा मानिसहरू मात्तेनन र प्रभुभोजको समयमा चेलाहरू मात्तेनन त्यसरी दाखमद्यको सदुपयोग गर्न हामीले जान्नुपर्छ र यसो गर्दा आत्मिक्ताको नाशभन्दा आत्मिक्ताको उन्नती हुन सहयोग पुग्छ।
मह खानु स्वास्थयको लागि असल हो, र चाहे जति मात्र खाउ तर यही धेरै खाए मानिस बिमारी हुन्छ र बान्ता गरीन्छ। उपदेशक २५:१६
मह पनि बढी खाइयो भने मानिसहरू मात्तिन्छन् र बाइबल बताउँछ मह चाहे जति खाए स्वास्थयको लागि राम्रो हो। यहि कुरा दाखमद्यमा पनि लागु हुन्छ। धेरै खाए मात्तिन्छ र यसले हानी पुर्याउँछ।
म सानो बेलामा सर र मिसहरूले धेरै माया गरेको कारण मात्तिने गर्थे। घुर्की देखाउने, ठुस्स पर्ने जस्ता मेरो स्वाभाव हुनपुग्थ्यो। तर प्रेमको कारण मात्तेको देखे पछि सर र मिसहरूले, “यो हाम्रो मायाले धेरै मात्तियो त्यसैले हामीले भनेको कुरा मान्दैन, अब यसलाइ तह लाउनु पर्छ भनि कुनै गल्ती गर्दा गाली गर्थे” त्यस पछि मेरो बानी बेहोरामा बदली आउँथ्यो।
कुनै पनि कुराले हामी मात्तिनु राम्रो होइन किनभने यो हानिकारक छ। जसरि म लाइनमा आए, त्यसैगरी तपाइहरू जो दखमद्य सेवन गर्ने निर्णय लिनुभएको छ, तपाइ नमात्तिनुहोस भनी म आग्रह गर्छु नत्र बाइबल त्यतिकै मत्तवालिहरू नरकमा पर्छन भनेर हामीलाइ चेताउनी दिएको भने छैन। बढी दाखमद्यको मात लाग्न थालेको छ भने त्यसले हाम्रो लागि नरकमा ओच्छयान पनि बनाइराखेको छ।
दाखमद्य पिउनु वा नपिउनु:
फाइदा हुने गरी खान आउँदैन भने यसलाइ नछोएकै राम्रो। यसको दुरूपयोग नहोस् नत्र यसले तपाइको पनि दुरूपयोग गर्न जानेको छ।
वास्तवमै भन्ने हो भने यो नपिएकै राम्रो हो किनभने हामी मानव जातिलाइ कुनै पनि कुरा राम्ररी प्रयोग गर्न आउँदैन।
बाइबलले आनन्द मनाउन र पेटको रोग हटाउन पिउ भनेको छ तर हामि घरी घरि मात्तिनको लागि पिउने गर्छौ। बाइबले दाखमद्यको कुरा गरेको तर कतिपय ख्रीष्टियानहरू चााहि रक्सी, जाँड, वियर र अन्य मत्वाली पदार्थ सेवन र व्यापार गर्न लिप्त छन्।
देख्नुभयो त !! के हामीले येशूको दाखमद्यलाइ बुझेर पनि सदुपयोग गर्ने थियौ र ?
दाखमद्य र ख्रीष्टियान जीवन Reviewed by Admin on Jan 07 . हामी आज एउटा ठूला विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो हो के ख्रीष्टियानहरूले दाखमद्य पिउनुहुन्छ ? यो विषय निकै नै गम्भीर भएको छ। धेरै ख्रीष्टियानहरू यस विषयमा र हामी आज एउटा ठूला विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो हो के ख्रीष्टियानहरूले दाखमद्य पिउनुहुन्छ ? यो विषय निकै नै गम्भीर भएको छ। धेरै ख्रीष्टियानहरू यस विषयमा र Rating: 0
इसार्इ चलचित्र ‘क्याफे’ को ट्रेलर स...ख्रीष्टियन समाजद्वारा कुलमान घिसिङ...